Wararka - Waa maxay doorka ay ka ciyaaraan CBD duurka alaabada xayawaanka?
1. Waa maxay CBD?
CBD (ie cannabidiol) waa qaybta ugu weyn ee aan maskaxda ka jirin ee xashiishadda. CBD waxay leedahay saameyn daawooyin kala duwan, oo ay ku jiraan anti-walwalka, anti-psychotic, antiemetic iyo anti-bararka guryaha. Sida laga soo xigtay warbixinnada ay soo heleen Websaytka Sayniska, Scielo iyo Medline iyo daraasado badan, CBD waa mid aan sun ku jirin unugyada aan isbeddelayn, ma sababo isbeddellada qaadashada cuntada, ma sababo qallafsanaan nidaamsan, mana saameynayso xuduudaha jir ahaaneed (heerka garaaca wadnaha) , Cadaadiska dhiigga) Iyo heerkulka jirka), ma saameyn doono safarka mareenka caloosha mana beddeli doono dhaqdhaqaaqa maskaxda ama shaqada maskaxda.
2. Saamaynta wanaagsan ee CBD
CBD kaliya kuma xallin karto jirrada jir ahaaneed ee xayawaanka, laakiin sidoo kale waxay si wax ku ool ah u xallin kartaa cudurka maskaxda ee xayawaanka; isla mar ahaantaana, sidoo kale waxay waxtar badan u leedahay xallinta dareenka dhibta leh ee xayawaanka rabaayadda ah ee ku saabsan jirrada xayawaanka.
2.1 Ku saabsan CBD si loo xalliyo cudurrada jir ahaaneed ee xayawaanka rabaayadda ah:
Kordhinta lahaanshaha xayawaanka adduunka iyo doorbidista milkiilayaasha xayawaanka ee kharashka xayawaanka, kobaca CBD oo ay weheliso warshadaha sahayda xayawaanka ayaa noqotay suuq si dhakhso leh u koraya Waxaan aaminsanahay in milkiilayaasha badankood ay leeyihiin faham qoto dheer. Isla mar ahaantaana, qandho, cunto xumo, madax-xanuun, cudurrada neef-mareenka, xitaa curyaannimo iyo kansar ma aha dhacdooyin naadir ah oo xayawaanka lagu haysto. Waxtarka CBD wuxuu door firfircoon ka ciyaarayaa xalinta dhibaatooyinka kor ku xusan. Kiisaska soo socdaa waa kuwa metela:
Dr. Priya Bhatt, madaxweynihii hore ee Ururka Caafimaadka Xoolaha ee Chicago, ayaa tiri: Xayawaanku badanaa waxay la kulmaan walaac, cabsi, qandho, cunto xumo, madax xanuun, caabuq iyo cudurada neefsashada, iyo xitaa curyaannimo iyo kansar. Isticmaalka CBD wuxuu yareyn karaa astaamaha iyo astaamaha. Cadaadisku wuxuu u oggolaanayaa carruurta Mao inay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo ku sugan xaalad caafimaad iyo nabad ah.
Eyga Kelly Cayley xaaladdiisa si aad ah ayaa loo hagaajiyay ka dib markii la isticmaalay CBD: Lirad-jir Labrador Cayley wuxuu la nool yahay milkiilihiisa Brett magaalada Oxfordshire, England. Brett wuxuu ogaaday in Cayley lugaha ay ahaayeen kuwo aad u adag oo mararka qaar xanuun la socda. Dhakhtarku wuxuu go'aamiyay in Cayley uu lahaa arthritis, sidaa darteed wuxuu go'aansaday inuu siiyo Cayley 20 mg CBD maalin kasta. Intii lagu gudajiray isticmaalka, wax saameyn ah iyo astaamo kale lama arkin, iyo dabacsanaanta lugta Cayley si weyn ayaa loo hagaajiyay.
2.2 Ku saabsan CBD si loo xalliyo cudurka maskaxda ee xayawaanka rabaayadeed:
Ma aqaano haddii milkiilaha xayawaanku uu ogaaday in ka tagista xayawaanka keligiis ah ee guriga ay sababi doonto walaac badan. Sida laga soo xigtay tirakoobka sahanka, 65.7% milkiilayaasha xayawaanku waxay ogaadeen in CBD ay yareyn karto welwelka xayawaanka; 49.1% milkiilayaasha xayawaanka ah waxay ogaadeen in CBD ay hagaajin karto dhaqdhaqaaqa xayawaanka; 47.3% milkiilayaasha xayawaanku waxay ogaadeen in CBD ay hagaajin karto hurdada xayawaanka; 36.1% milkiilayaasha xayawaanku waxay ogaadeen in CBD ay hagaajin karto hurdada xayawaanka Waxaa la ogaaday in CBD ay yareyn karto cabaadka iyo cabaadka xayawaanka. Kiisaska soo socdaa waa kuwa metela:
“Manny waa karraaniga 35 jirka ah ee haysta eey xayawaan ah Maxie. Maxie ayaa kaligiis looga soo tagay guriga markuu shaqada joogay. Dhamaadkii sanadkii hore, Manny wuxuu maqlay in CBD ay hagaajin karto welwelka xayawaanka. Sidaa darteed wuxuu ka bartay xayawaan guriye ah Dukaanka qaaska ah wuxuu soo iibsaday dhalo ah tincture CBD wuxuuna 5mg geliyaa cuntada Maxie maalin kasta. Saddex bilood ka dib, wuxuu ogaaday in markuu shaqada ka soo laabto, Maxie uusan u walwalayn sidii hore. Wuxuu umuuqday mid deggan, deriskiina kama sii cawdeen Maxie. Oohin. ” (Laga soo bilaabo kiis dhab ah oo ka yimid Profiles Parent Profiles).
Nick wuxuu leeyahay eyga xayawaanka ah, Nathan, muddo 4 sano ah. Guurka kadib, xaaskiisa ayaa keentay bisad xayawaan. Bisadaha xayawaanka iyo eyda xayawaanka ah ayaa badanaa weerara oo isku ciqaabta. Dhakhtarka xoolaha ayaa kula taliyay CBD inuu Nick sharaxaad ka bixiyo. Nick wuxuu ka iibsaday xoogaa cunto xayawaan ah CBD-ka internetka wuxuuna ku quudiyay bisadaha iyo eyda. Bil ka dib, Nick wuxuu ogaaday in gardarrada labada xayawaan ee midba midka kale uu si weyn hoos ugu dhacay. (Waxaa laga soo xushay kiisaska dhabta ah ee Profiles Parent Profiles)
3. Xaaladda dalabka iyo horumarka cusub ee CBD ee Shiinaha
Sida laga soo xigtay xogta taariikhiga ah, waaxda wax soo saarka xayawaanka Shiinaha ayaa gaadhay xajmiga suuqa ee 170.8 bilyan yuan sanadka 2018, iyadoo koror ku dhowaad 30%. Waxaa la filayaa in sanadka 2021, cabirka suuqa uu gaari doono 300 bilyan yuan. Kuwaas waxaa ka mid ah, cuntada xayawaanka (oo ay ku jiraan cuntada daruuriga ah, cunnooyinka fudud, iyo wax soo saarka caafimaadka) waxay gaareen cabir suuq ah oo ah 93.40 bilyan yuan sanadka 2018, iyadoo koror dhan 86.8%, taas oo ah koror la taaban karo laga bilaabo 2017. Si kastaba ha noqotee, xitaa iyadoo si dhakhso leh loo ballaariyo ee suuqyada xayawaanka ee Shiinaha, dalabka CBD wali aad ayuu u yar yahay. Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah milkiileyaasha xayawaanku waxay ka walwalayaan in daroogooyinkaasi aysan ammaan ahayn, ama aysan ku badnayn ficil ahaan Shiinaha, dhakhaatiirtuna aysan sameynin. Si fudud ayuu u qaadan doonaa daawada, ama, CBD maahan mid guud ahaan dalka ka jirta, shacbiguna kuma filna. Si kastaba ha noqotee, marka lagu daro xaaladda dalabka CBD ee adduunka, marka Shiinaha uu furo suuqa cuntada xayawaanka ee CBD (cannabidiol), qiyaasta suuqyada ayaa noqon doonta mid aad u tiro badan, milkiilayaasha xayawaanka Shiinaha iyo xayawaanka rabaayadduna waxay ka faa'iidi doonaan wax badan tan!
Marka loo eego baahiyaha suuqa xayawaanka, qoraalka farmasiga ee Mareykanka ayaa ku casuumay Aligned-tec inuu soo saaro filim kala-baxa afka xayawaan gaar ah (CBD ODF: Afka Kala-baxa Afka). Xayawaanku si waxtar leh ayey u nuugaan. Sidaa darteed, CBD ODF wuxuu ku xalliyaa dhibaatooyinka milkiilayaasha xayawaanka leh dhibaatooyinka quudinta iyo cabbiraad aan sax ahayn, waxaana si ballaaran u ammaanay suuqa. Tani waxay sidoo kale horseedi doontaa kor u kac kale oo ku saabsan berrinka alaabooyinka xayawaanka!
Nuxurka maqaalkani wuxuu ka yimid shabakada warbaahinta, oo dib loo soo saaray ujeedada wadaagista macluumaadka, sida waxyaabaha ku jira shaqooyinka, arrimaha xuquuqda daabacaadda, fadlan nala soo xiriir 30 maalmood gudahood, waan hubin doonnaa oo tirtiri doonnaa markii ugu horreysay. Nuxurka maqaalka waxaa iska leh qoraaga, matali maayo aragtideena, mana ahan wax soo jeedin ah, bayaankan iyo howlahanna waxay leeyihiin fasiraadii ugu dambeysay.